I-Google Docs: Isihleli Sedokhumenti eku-Inthanethi | i-Google Workspace
Ngena ngemvume Iya ku-Docs Zami-docs for work
Yakha imibono yakho ehamba phambili ndawonye, ku-Google Docs
Sungula uphinde uhlanganyele kumadokhumenti aku-inthanethi ngesikhathi sangempela futhi kusukela kunoma iyiphi idivayisi.
Zami-docs for work Iya ku-Docs
Bona ukuthi ungenzani nge-Google Docs
Ukuhlanganyela okungenazihibe, kusukela noma ikuphi
Hlela ndawonye ngesikhathi sangempela ngokwabelana okulula, uphinde usebenzise amazwana, iziphakamiso, nezinto zesenzo ukugcina izinto zihamba. Noma sebenzisa i-@-mentions ukuletha abantu abahambisanayo, amafayela, nemicimbi kuma-Doc akho aku-inthanethi ngokuhlanganyela okunothile.
Bhala ngokushesha ngokuhlakanipha okwakhelwe ngaphakathi
Izakhi ezisizayo ezifana Nokuqamba Okusmathi zikusiza ubhale ngokushesha nangamaphutha ambalwa, ukuze ukwazi ukugxila kimibono. Uphinde ulondoloze isikhathi ngeziphakamiso zokupelwa neze-grammar, ukuthayipha ngezwi, nokuhumusha okusheshayo kwedokhumenti.
Xhumeka ngokungenazihibe kwamanye ama-app akho e-Google
I-Docs ixhunywe ngokucabanga kwamanye ama-Google app owathandayo, okukulondolozela isikhathi. Phendula kumazwana ngokuqondile kusukela ku-Gmail, shumeka amashadi kusukela ku-Google Sheets, uphinde wabelane kalula nge-Google Meet. Ungaseshela iwebhu ne-Google Drive ngokuqukethwe okuhambisanayo nemifanekiso, ngokuqondile kusukela ku-Docs.
Letha ukuhlanganyela nobuhlakani kwezinye izinhlobo zefayela
Hlela kalula amafayela e-Microsoft Word ku-inthanethi ngaphandle kokuwaguqula, kanye nesendlalelo kuzakhi ze-Docs ezithuthukisiwe zokuhlanganyela nezisizayo ezifana nezinto zesenzo Nokuqamba Okusmathi. Ungaphinda ungenise ama-PDF, uwenze ahleleke ngokushesha.
Finyelela kuma-app ahlukile angahlangene ngqo, ngokuqondile kusukela ku-Docs. Noma kuyi-e-signature app noma ithuluzi lokuphathwa kwephrojekthi, livule kusukela ku-Docs ukuze usebenze ngokushesha.
Sebenza kokuqukethwe okusha
Nge-Docs, wonke umuntu osebenza nguhlobo lwakamuva ledokhumenti. Futhi nangokuhlela ulondoloza ngokuzenzekelayo kumlando wohlobo, futhi kulula ukulandelela noma ukuhlehlisa ushintsho.
Hlala ukhiqiza, nanoma ungaxhunyiwe ku-inthanethi
Ungafinyelela, usungule, uphinde uhlele ama-Docs nangaphandle kokuxhumeka kwe-inthanethi, okukusiza ukuthi uhlale ukhiqiza kusukela noma ikuphi.
Sisebenzisa izindlela eziphuma phambili zomkhakha zokuvikela ukugcina idatha yakho iphephile, okufaka ukuvikelwa kohlelo olungayilungele ikhompyutha. I-Docs iphinda idabuke kumafu, okususa isidingo samafayela asendaweni kuphinde kunciphise ingcuphe kumadivayisi akho.
Imikhiqizo yethu, efaka ama-Docs, ngokuvamile idlula ekuqinisekisweni okuzimele kokuvikela kwayo, ubumfihlo, kanye nezilawuli zokuthobelana.
I-Docs ithobela ukuzinikela okufanayo okuqinile nokuvikelwa kwedatha njengawo wonke amasevisi ebhizinisi le-Google Cloud.
Asilokothi sisebenzise okuqukethwe kwakho kwe-Docs ngezinjongo zesikhangiso.
I-Google Docs iyingxenye ye-Google Workspace
Zami-docs for work
Hlanganyela kusukela noma ikuphi, kunoma iyiphi idivayisi
Finyelela, sungula, uphinde uhlele amadokhumenti akho noma ukuphi — kusukela kunoma iyiphi idivayisi yeselula, ithebulethi, noma ikhompyutha — nanoma ungaxhunyiwe kwi-inthanethi.
Khetha kusukela kuzinhlobo zamadeshibhodi, izilandeleli zephrojekthi, nezinye izifanekiso edizayinwe ongoti, ukuqalisa izinto ngokushesha.
Vakashela Igalari Lesifanekiso se-Docs ukuze uthole okuningi.